Andriamalazaray Andoniaina: “Tena mila jerena akaiky amin’izay ny fifidianana depiote” | NewsMada
Andriamalazaray Andoniaina: “Tena mila jerena akaiky amin’izay ny fifidianana depiote”
Vita iny ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Hanao ahoana ny fifidianana depiote? Maneho ny fijeriny ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina:” Tena mila jerena akaiky amin’izay ny fifidianana solombavambahoaka. Satria tokony ho fe-potoam-piasana vaovao no hiasan’ny solombavambahoaka ny talata voalohany amin’ny volana mey.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Taorian’ny fifidianana filohan’ny Repoblika teo, inona ny fanatsarana tokony hatao amin’ny fifidianana?
Andriamalazaray Andoniaina (-): Niarahantsika nahita tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika: na ahoana na ahoana, ny lisitry ny mpifidy tamin’iny no tsy maintsy ampiasaina raha hatao mialoha ny 15 mey ny fifidianana. Tena mila jerena akaiky amin’izay ny fifidianana solombavambahoaka. Satria tokony ho fe-potoam-piasana vaovao ny hiasan’ny solombavambahoaka ny talata voalohany amin’ny volana mey, amin’ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny Antenimierampirenena amin’ity taona ity.
Noho izany, tokony ho alohan’io talata voalohany amin’ny volana mey io no hanaovana ny fifidianana solombavambahoaka. Nefa manoloana ny fampanantenana nataon’ny filohan’ny Repoblika vao voafidy, Rajoelina Andry, mety hisy fanatsarana ny lalàmpanorenana. Miankina aminy izany izay, aorian’ny hanaovany fianianana handraisany ny toerany sy ny mety aorian’ny fanendreny praiminisitra hoe: inona ny politika hitondrany ny firenena, ny lalàmpanorenana ve no hahitsy maika sa ny solombavambahoaka no hofidina?
* Mety ho mora na handeha ho azy amin’izao ve izany?
– Misy zavatra mety manahirana ihany ao anatin’izay. Satria raha halefa aloha ny fifidianana solombavambahoaka, tsy maintsy hanendry praiminisitra izy aorian’ny fifidianana. Raha ny lalàmpanorenana kosa, ohatra, no hokitihina voalohany: ahoana àry ny fomba hitantanana ny governemanta na ny eo anivon’ny fanaovan-dalàna, ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona izany?
Na izany na tsy izany, ny lesona tokony horaisina tamin’iny fifidianana filohan’ny Repoblika iny: any amin’ny biletà anaovana fifidianana. Ho an’ny KMF/Cnoe: raha vao nasionaly ny fifidianana, tsara kokoa raha biletà tokana hatrany no ampiasaina; rehefa fifidianana teritorialy, eo amin’ny sehatry ny distrika na kaominina, tsara sy mora kokoa raha biletà isaky ny kandidà.
Milaza ny And. 120 amin’ny lalàna fehizoro 2018-008 mifehy ny fifidianana hoe tsy maintsy misy laharana avokoa ny sosona na ny taratasin-datsa-batom-pifidianana na biletà. Efa nahita vahaolana momba izay ny KMF/Cnoe hialana amin’ny hoe: manao ahoana ny fanajana ny tsiambaratelom-pifidianana? Mahita izahay fa azo atao ny mametraka laharana amin’ny taratasin-datsa-bato sady manaja ny tsiambaratelom-pifidianana. Azo resahina amin’ny tomponandraikitra sy ampahibemaso izany, rehefa tonga ny fotoana ilàna azy. Satria tsy tsara raha izao no iresahana izany sahady.
* Inona koa ny fanatsarana tokony hatao ankoatra izay?
– Ny iray mila hatsaraina, toy ny soso-kevitra narosonay nandritra ny fanaraha-maso ny fifidianana fihodinana voalohany sy faharoa: ho an’ny mpanao politika sy ny kandidà, aza mirotsa-kofidina aloha rehefa tsy manana delege mahafehy ilay asa. Ny atao hoe manana delege, tsy ny manana olona alefa fotsiny ao anatin’ny birao fandatsaham-bato fa ny manana olona nahavita fiofanana ary tsara ofana.
Amin’izay fotoana izay, tsy hisy intsony izany fitoriana apetraka momba ny fifidianana ka hoe azo raisina fa tsy mitombina. Anisan’ny tokony horaisin’ny mpanao politika koa rehefa mampiasa mpisolovava: misy ny efa nofanina manokana momba ny ady amin’ny fifidianana. Tsara ny hampiasana ireny olona ireny.
* Ary eo amin’ny olom-pirenena?
– Anisan’ny andraikitry ny olom-pirenena izay tokony hohatsaraina sy tokony hiainana: mahasahia mijoro manoloana ny tsy fahatomombanana misy. Satria lasa mahatonga ny fitarainana sy fitoriana horaisin’ny mpitsara hoe tsy mitombina ny tsy fahasahiantsika mijoro sy manome porofo.
Aty amin’ny lafiny fiainana ankapobeny ny fizotran’ny fifidianana, mila hamafisin’ny Ceni ny fahaiza-manaon’ireo mpikambana amin’ny birao fandatsaham-bato. Satria tsy misy afa-tsy ny fifehezan’izy ireo ny asany araka ny tokony ho izy ihany no ahazoan’izy ireo mahomby sy manatsara kokoa izany.
* Ahoana izany ny fiatrehana ny fifidianana ho avy?
– Tsara raha tohizan’ny Ceni hatrany ny fangaraharana izay efa nasehony. Fa ny momba ny tsy fanavahana sy ny tsy fiandaniana, tena mbola misy ezaka goavana be… Mila atao izany na eo anivon’ny Ceni na mpiasam-panjakana. Satria ny And. 60 sy manaraka ao anatin’ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana ankapobeny, mandrara izay fanavahana sy fiandaniana izay. Nefa tsikaritra izany tamin’iny fifidianana filohan’ny Repoblika iny. Samy nahitana izany avokoa na ny andaniny na ny ankilany.
Raha ho avy ny fifidianana solombavambahoaka izay somary manaikaikaiky kokoa ny vahoaka, mora amin’ny vahoaka ny manara-maso hoe: iza no manao inona? Hifanampy hatrany ny KMF/Cnoe na amin’ny kandidà, na amin’ny vahoaka, na ny samy firaisamonina sivily ao anatin’izay fanaraha-maso sy fifanampiana amin’ny fampiofanana izay raha ilain’ny olona.